FEIT oo caawa laga sugayo shaacinta xildhibaannada | KEYDMEDIA ENGLISH
FEIT oo caawa laga sugayo shaacinta xildhibaannada
Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, Fahad Yaasiin, wuxuu ku fashilmay is ku day uu doonayay inuu ku kala jabiyo Guddiga her Federaal, kadib markii FEIT ka hor timid is-boqriddiisa, wuxuuna hadda cadaadis saarayaa Guddoonka si ay kursiga u fasaxaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga Doorashooyinka heer Fedraal [FEIT], ayaa caawa laga sugayaa in ay ku dhawaaqaan natiijada kama danbeysta ah ee Xilidhibaannada Labada Aqal, ee liiskooda ay soo wareejiyeen Guddiyada SEIT.
Sida ku cad, jadalka guddiga doorashooyinka ee 15 bishaan soo baxay, 31-ka Maarso oo maanta ku beegan ayaa loo madlay shaacinta natijada rasmiga ah ee xildhibaannada ilaa hadda soo baxay, waxaana guddiga laga war sugayaa ilaa caawa.
Xogo ay heshay Keydmedia Online, ayaa sheegaya, in guddigu isku fahmi la’yihiin kuraasta qaarkood, gaar ahaan kuwa hore loo diiday natiijadooda, waxaana jira in ay xubno ka mid ah FEIT u istaageen difaaca eedeysane Fahad Yaasiin.
Dhamaan Guddiyada SEIT, ayaa Guddiga Doorashooyinka heer Fedraal, ku wareejiyay, galalka xildhibaannada ilaa hadda la doortay, waxaana la filayaa in labada April, Xildhibaannada loogu yeeri doono in ay soo xaroodaan.
Guddiga Doorashooyinka (FEIT), waxa ay 21 February 2022, si cad u diideen, boobkii Fahad Yaasiin ku qaatay kursiga HOP086, 20 February, halka ay xilligaas ka hor hakiyeen doorashada kursiga, lamina filayo inuu ka soo muuqdo liiska la shaacinayo.